”Ilmaha waxaa wadnaha lagala baxaa iyagoo weli nool!” – Mashruuc ay maalgeliso DF Maraykanka oo dhaqan bahalnimo ah lagu helay! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Ilmaha waxaa wadnaha lagala baxaa iyagoo weli nool!” – Mashruuc ay maalgeliso...
”Ilmaha waxaa wadnaha lagala baxaa iyagoo weli nool!” – Mashruuc ay maalgeliso DF Maraykanka oo dhaqan bahalnimo ah lagu helay!
(Pittsburgh) 07 Agoosto 2021 – Dokumentiyo cusub oo soo ban-baxay ayaa muujinaya in Maraykanku uu xubnaha kala boxo ilmaha yar ee lasoo rido jeer ay xitaa qaarkood nool yihiin.
Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadmiga (HHS) ee DF ayaa uu dokumentigu caddaynayaa inay $2.7 milyan oo doollar u saxiixday barnaamij ay waddo Jaamacadda University of Pittsburgh kaasoo xubnaha loogala baxayo ilmaha lasoo tuuro ee jira 6-42 todobaad, iyadoo ay 42 todobaad ka dhigan tahay uur 10 bilood ah.
Tafaasiishan cajiibka ah ayaa waxaa kashifay ururrada muxaafidka ah ee Judicial Watch iyo Center for Medical Progress oo helay dokumentiyo gaaraya 252 bog, taasoo uu u saamaxey Xeerka dhigaya inay dadku xogaha xaq u leeyihiin ee Freedom of Information Act iyagoo dacweeyey HHS.
Lacagtan oo jaamacadda University of Pittsburgh loo fasaxay 2015-kii ayaa waxaa arjigii codsigeeda ku xusan inay “nudayaasha uur ku jirka ururinaysey muddo 10 sanadood ah… waxaana ka mid ah beerka, wadanaha, xubnaha taranka sameeya sida xaniinyaha iyo minka, lugaha, maskaxda, kelyaha, tubada kaadida qaadda iyo kaadi haysta.”
Jaamacadda ayaa sheegtay inay doonayso inay abuurto qaab lagu helo xubnahaasi kaddibna si tayaysan loo kaydiyo oo deeto loogu qaybiyo dadka u baahan, waxaana yaab leh in 80% xubnaha ay hayaan ay caddaan yihiin, halka 13% oo qur ihi ay madow yihiin.
Waxaa ugu daran sida CMP uu sheegayo in “ilmaha yar oo mararka qaar dhamays ah lasoo saarayo isagoo nool oo uu dhiiggiisu wareegayo wadnihiisuna garaacmayo si loo ilaaliyo tayada xubinta, iyadoo xubnaha lagala baxayo isagoo weli nool, kaddibna uu u dhimanayo xubnihii lagala baxay.”
— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) August 5, 2021
Falanqeeyaha muxaafidka ah ee Jack Posobiec ayaa sidaa darteed farta ku godaya warbixin 2019-kii lagu faafiyey Newsweek oo aad loogu weerarayey kabiirka aragti-dhagareedka Alex Jones oo ku doodayey in meelaha lagu sameeyo cilmi baarista caafimaadku ay “ay ilmaha oo nool kala baxaan xubnaha muhimka ah.”
Jones ayaa sida la ogyahay laga wada eryey maxaddooyinkii baraha bulshada oo uu ku lahaa malaayiin raace.
Previous articleRW Rooble oo Nairobi ku wajahan & arrimo badan oo la isku hayey oo heshiis laga gaarayo
Next article”Abaal ruuxi ah ayaan kuu haynaa” – Ansu Fati oo si qiiro leh uga hadlay abaal uu Messi u galay isaga iyo qoyskiisa
(Hadalsame) 24 Jan 2022 - Haddii aqoonta fiisikada ay tahay mid inoo-qeexda xeerarka caalamka ma-noolaha ah, aqoonta noole-baradkuna ay tahay mid iyana inoo-qeexda xeerarka...